बिल्कुल सबैलाई स्पष्ट छ क्षमता कुराकानी गर्न र अरूलाई सजिलो जीवन सामान्य जमीन पाउन। र आफ्नै खालको समाज को आवश्यकता मा एक सामाजिक रूपमा मानिस। तर अरूलाई साथ प्राप्त गर्न तिनीहरूले प्रेम होइन सक्षम हुन। र भाग्य हामीलाई प्रत्येक हामी मान्छे संग एक सम्बन्ध रुचि थिएन, यो सौम्य राख्न, कायम गर्न हुनेछ। यस सन्दर्भमा, अरूलाई थप निष्कपट र आफूलाई गर्न इमानदार र misanthrope अनुग्रह। यो अवधारणा Alceste - - गिल्ला र मानव पाप र कमजोरी अवहेलना कारण मुख्य पात्र जसमा Moliere कमेडी "Misanthrope" धेरै लोकप्रिय भएको छ।
Misanthrope। के सम्झौता?
Misanthrope - अन्य despises गर्ने व्यक्ति, तिनीहरूलाई सम्पर्क जोगिन। यो शब्द "misanthropist" को रूपमा ग्रीक देखि अनुवाद गरिएको छ। यद्यपि, साँच्चै, मानिसजातिको कुल घृणा थुप्रै आरोप misanthropes, वास्तवमा, कुरा छैन त खराब छन्। मानव रूप वा एकान्तवासी मा एक राक्षस - का उहाँले छ जो हेरौं?
Misanthrope - बहु-faceted अवधारणा। र अस्पष्ट रूपमा misanthropy तिर मान्छे मनोवृत्ति। कसैले व्यक्तिगत मात्र अरूलाई misanthropy भनेर विश्वास गर्दा, भनिन्छ «होमो Sapiens» संक्रमण ग्रह छुटकारा गर्ने बारे सपना कि सोच्छ - नै एक कुरा हो, एक misanthrope घृणा खातिर सबै मानिसजातिको घृणा बसोबास छ सबै मानिसजातिको। तर यी विशेषताहरु सामाजिक phobia र sociopaths लागि थप उपयुक्त। मान्छे घृणा अचाक्ली घृणा अनुभव रूपमा Misanthrope। उहाँले आफ्नो नैतिकता र कमजोरी, अरूलाई उच्च महसुस स्वीकार छैन। नियम, एक misanthrope मानवता एक सम्पूर्ण रूपमा, स्थानान्तरणका बिना प्रेम भन्ने भावना विशिष्ट मानिसहरूलाई। संचार को लागि को रूप मा, व्यक्ति प्रियजनहरूलाई र मित्र उहाँले सानो छ एक धेरै न्यानो सम्बन्ध राख्छ। आफ्नो घनिष्ठ सर्कल मात्र प्राप्त निर्वाचित गर्न सक्नुहुन्छ।
Misanthrope - यो संक्रामक छ?
प्रश्न उठ्छ: misanthropes जन्म वा ती तिनीहरूको अवस्था गरिरहेको? सायद, मान्छे समय जीवनको एक दर्शन गर्न आउँछन्। Misanthrope - पातलो र कमजोर प्राण संग एक रनभुल्लमा idealist। तर आशाहीनता केही प्रकारको भावना तिनीहरूलाई दुर्गम cynics बनाउँछ।
एक misanthrope र philanthropist - तपाईंलाई कस्तो छ जो निर्धारण गर्न?
तपाईं मान्छे रीस उठाउनु भने, यो तपाईं हड्डी एक misanthrope हो कि होइन। सायद तपाईं साधारण निराशा छ। तपाईं एक परीक्षण प्रस्ताव गर्दै तल जो तपाईं मान्छे को जो कोटीमा तपाईं निर्धारण गर्न सक्नुहुन्छ।
परीक्षण: "द Misanthrope र philanthropist - कसैले तपाईंलाई थप?"
1 अफ्रिकी बच्चाहरु भोक को टिभि प्रसारण मा। र टिभी स्क्रिनमा को तल एक बैंक खाता नम्बर, जो तपाईं पैसा हस्तान्तरण गर्न सक्नुहुन्छ एउटा जानकारी लाइन चल्छ:
क) विभिन्न च्यानलमा स्विच गर्नुहोस्।
बी) तुरुन्त स्थानान्तरण गर्न बैंक जानुहोस्।
) तिनीहरूलाई पनि खाँचोमा परेका मदत गर्न प्रोत्साहन, सबै नातेदार र साथीहरू माथि घण्टी गर्न सुरु हुनेछ।
डी) दबाइ व्यापारीहरु को आवश्यकता मा केहि rubles भुक्तानी गर्न रुचि थियो।
2. पुस्तकहरू कस्तो तपाईं पढ्न रुचि हो?
एक) दार्शनिक अज्ञेयवाद र stoic पर्चा।
बी) Masterpieces दारी Dontsovoy।
बी) पढ्न छैन।
डी) चरा, कल्पना, साहसिक।
3. तपाईं वरिपरि मानिसहरू के हुन्?
एक) तिनीहरूले मलाई चारै ओर?
ख) हेर्न भने - मान्छे मान्छे हो, त्यहाँ पनि धेरै राम्रो हो।
ख) धूलो despicable त्रुटिहरू।
डी) म बस तिनीहरूलाई प्रेम।
4 तपाईंले मृत्यु दण्ड कस्तो लाग्छ?
एक) केही मानिसहरू लागि, यो लागू गर्न आवश्यक छ।
ख) यस मुद्दा सम्बोधन गर्न राज्य हो।
डी) सकारात्मक मनोवृत्ति।
5 सार्वजनिक समारोह - छ:
एक) पिउन अर्को कारण।
को काम मान्छे को लागि बी) धेरै राम्रो मनोरञ्जन।
बी) मानिसहरूको लागि कारण पिएको प्राप्त गर्न र आफ्नो सबै पैसा खर्च गरेका छन्।
डी) idlers एक गुच्छा, मुक्त रोटी र circuses उत्सुक।
6 शब्द "मानविकी" - उपचार कस्तो तपाईं यसलाई चयन?
क) कृमि पुस्तक पसल।
बी) नजिकैको घर देखि खैरो-haired प्रोफेसर।
डी) प्राचीन रोम आए भन्ने अवधारणा।
7 के तपाईं हरर चलचित्रहरू छन्?
एक) पक्कै - बकवास, म देख छैन।
बी) maniacs लागि एउटा भिडियो ट्युटोरियल।
बी) म त्यहाँ एक बियर, विशेष गरी यदि आफ्नो साथीहरूसँग हेर्न चाहनुहुन्छ।
डी) म को सट्टा हेर्न "राम्रो रात, बच्चाहरु।"
8 तपाईं सडक मा खाँचोमा परेका कसरी अक्सर खुवाउन गर्छन्?
एक) सधैं जब म हेर्नुहोस्।
बी) रूपमा चाँडै म हेर्न रूपमा, म सडक को अन्य पक्ष गर्न गयौं।
बी) के हो? म कहिल्यै देख्यौं।
डी) तिनीहरूलाई काम गर्न जाने गरौं, र अशिष्ट।
तपाईं के विचार गर्छन्9भन्दा रमाइलो छ?
एक) पशु, तिनीहरूले पंजे पंजे थिए।
बी) विपरीत सेक्स को प्रतिनिधिहरु।
बी) आफैलाई लागि नयाँ पोशाक।
डी) काँटाले बुन्नु।
10 तपाईंको बुझाइ मा आक्रमण के हो?
क) समस्या सुलझाने मा अचेत मानव व्यवहार।
बी) किनकी मान्छे प्रबन्ध छन्।
बी) आक्रमण बिना, कुनै प्रगति छ।
घ) मानव मूर्खता।
1 एक-2 बी-1 सी-14D-
2. एक-2 बी-3 सी-4 डी-1
3. एउटा-2 बी-2 सी-3 डी-0
4 एक-3 बी-1 सी-0 डी-4
5 एक-बी-10सी-2 डी-4
6 एक-2 बी-2 सी-2 डी-3
7 एक-2 बी-3 सी-0 डी-1
8 एक-0 बी-1 सी-4 डी-2
9 एक-1 बी-20सी-डी-3
10 एक-1 बी-20सी-डी-0
तपाईं गुलाबी रंग मा हेर्नुहोस्। सबै वरिपरि ठीक छ, र मान्छे, स्वर्गदूतहरू निम्ति जस्तै, सबै सेतो वस्त्र लगाएका र भावना को पनि आँसु उहाँको नजरमा Welling भनेर मीठो। र त्यहाँ बिल्कुल यी आकर्षक प्राणीहरू प्रेम गर्न कुनै कारण छ। तपाईं साँचो philanthropist छन्।
एक misanthrope वा philanthropists: तपाईँले चयन छैन अघि निम्न समावेश गर्न जो। तपाईं पर्याप्त त्यहाँ असल र खराब मानिसहरू हुन् भनेर थाह पाउँदा, वास्तविकता आकलन छन्। आफ्नो संसारमा, सबै कुरा को एक बिट - र सेतो र कालो।
20 भन्दा बढी
बधाई छ - तपाईं एक misanthrope हुनुहुन्छ, तपाईं अरूलाई तिनीहरूले सास फेर्न, हिंड्न सबै, भइरहेको बिदा मा मजा एक स्टोर उत्पादनहरूमा किनेको मा कष्टप्रद छन्। तपाईंले तिनीहरूलाई सबै एक मा ल्याउन चाहन्छौं spaceship एक दूरबिन मार्फत हेर्दै तिनीहरू टाढा र टाढा लगे रूपमा, एक मुस्कान संग, र जाने टाढा आकाशगंगाओं विजयी।
टकराव - मनोवैज्ञानिक परामर्श मा एक प्रभावकारी प्रविधी छ
लिइरहेको आफैलाई र आफ्नो चासो हेरविचार - स्वार्थ छ? परोपकारिता र स्वार्थ। सम्बन्धमा स्वार्थ
तर "Burenka" लोकप्रिय बन्ने छ
Alexey Kiselev जीवनी सोभियत घूंसेबाज र कोच
"परम्परागत चिकित्सा को स्वर्ण व्यञ्जनहरु" - पुस्तक
दार्शनिक विचार र वचनहरू: व्यावहारिक बुद्धि को एक गोदाम
Detraleks यसको आवेदन र सक्षमता समीक्षाएँ
नाम Alena को अर्थ: यो हुनेछ Elena!